CFM: “Hampilamina ny fifidianana ny Dinam-pihavanana” | NewsMada
CFM: “Hampilamina ny fifidianana ny Dinam-pihavanana”
Par Taratra sur 31/08/2018
Hanao ahoana ihany ny fifidianana? Misy ny manahy korontana… “Hampilamina ny fifidianana ny Dinam-pihavanana”, hoy ny CFM.
“Tanjona amin’ny Dinam-pihavanana ny hisian’ny fitoniana sy ny filaminana ao anatin’ny fifidianana. Manaraka izay, mba tsy hiteraka savorovoro eto amintsika indray io fifidianana io. Satria nisy ireo fifidianana niteraka savorovoro tato ho ato.”
Io no nambaran’ny filohan’ny Komitin’ny fampihavanana malagasy (CFM), i Maka Alphonse, teny Ampefiloha, omaly, momba ny hanaovan’ireo kandidà ho filohan’ny Repoblika Dinam-pihavanana izay hiarahan’ny CFM amin’ny Bianco sy ny Samifin ary ny CSI.
“Mba ho maodely ny eto amintsika: halain-tahaka eran’izao tontolo izao ny fifidianana eto amintsika. Mba hizotra amim-pilaminana izany, ary hoeken’ny rehetra”, hoy izy. Foto-kevi-dehibe misongadina amin’izay Dinam-pihavanana izay, raha ny momba ny fampielezan-kevitra: jerena ny hizoran’izany ao anatin’ny firahalahiana sy fihavanana. Mba tsy hanao teny mandratra, mety hiteraka lonilony sy ratram-po eo amin’ny samy Malagasy.
Jerena amin’izany koa ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena, indrindra ny kandidà sy ny mpomba azy, hanara-maso ny fifidianana. Midika izay fa omen’ny lalàna fahefana hanara-maso ny fizotran’ny fifidianana izy ireo.
Hanao sonia miaraka ireo kandidà 36
“Hampahafantarina ireo kandidà 36 ny Dinam-pihavanana, ary hiara-kidinika amin’izy ireo izahay ny amin’ny foto-kevi-dehibe nanaovana azy”, hoy izy. Mba hitondran-dry zareo koa ny fanatsarana fa volavolana ihany ny an’ny CFM. Samy tompon-draharaha ny rehetra. Homena fotoana hitondrana ny fanatsarana izy ireo.
Amin’ny farany, hiaraha-mankato ny Dina izy ireo, ary hisy fotoana hanaovana sonia izany miaraka. Amin’izany, ho hitan’ny vahoaka sy izao tontolo izao fa vonona hampanjaka ny fitoniana sy filaminana ireo kandidà 36: mpifaninana fa tsy mpifahavalo. Mbola hanatona ny fitondram-panjakana ny CFM tsy hisian’ny fitongilanana amin’ny sampandraharaham-panjakana rehetra mikirakira fifidianana.
Ho voahaja ve izany amin’izay efa zatra tsy manara-dalàna na mihevi-tena ho ambonin’ny lalàna? Na hisy ny tsy hanaiky hiara-kanao sonia amin’ny hafa noho ny fiheveran-tena… Zava-dehibe ny fananana etika politika na eo aza ny Dina.